सिन्धुलीमा पूँजीगत खर्च आधा मात्र | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश ०३ सिन्धुलीमा पूँजीगत खर्च आधा मात्र
सिन्धुली । चालू आर्थिक वर्षमा सिन्धुलीका स्थानीय तहहरूको पूँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । वैशाख मसान्तसम्म गाउँपालिकाभन्दा नगरपालिकाको बजेट खर्च दर कम देखिएको छ ।
बजेटको खर्च दर पनि भौतिक संरचना निर्माणभन्दा चेतनामूलक काममा बढी भएको पाइएको छ । जिल्लाका ९ ओटै स्थानीय तहको बजेट खर्चलाई हेर्दा ५६ दशमलव ८४ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । जिल्लाका दुई नगरपालिकामध्ये दूधौली नगरपालिकाको पूँजीगत बजेट खर्च ३७ दशमलव २७ प्रतिशत भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र पौडेलले बताए ।
नगरपालिकाले चालू आवका लागि रू. ३८ करोड ८९ लाख ५७ हजार ४३५ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जिल्लाकै पहिलो नगरपालिका कमलामाईको पूँजीगत खर्च ४६ दशमलव १६ प्रतिशत रहेकोे छ । नगरपालिकाले चालू आवका लागि रू. २६ करोड ७९ लाख पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म रू. १२ करोड ३७ लाखखर्च भएको लेखा अधिकृत टेकेन्द्र कार्कीले बताए ।
हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको पूँजीगत खर्चदर करीब ५६ प्रतिशत रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र सापकोटाले बताए । गाउँपालिकाले चालू आवका लागि रू.९ करोड ८६ लाख पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म रू. ५ करोड ५५ लाख खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
मरिण गाउँपालिकाको ४९ प्रतिशत, तीनपाटन गाउँपालिकाको ७० प्रतिशत, फिक्कल गाउँपालिकाकोे ६४ दशमलव ९७ प्रतिशत र घ्याङलेक गाउँपालिकाको पूँजीगत खर्च ४३ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ । गोलञ्जोर गाउँपालिकाको पूँजीगत खर्च हालसम्म ८० प्रतिशत भइसकेको छ भने सुनकोशी गाउँपालिकामा पूँजिगत खर्च ६५ प्रतिशत भइसकेको छ ।